Ukuthuthuzela 2 + 1 umamkeli ongcono edolophini ngeMoyeni - I-Airbnb
Ukuthuthuzela 2 + 1 umamkeli ongcono edolophini ngeMoyeni
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguOmer
Iflethi ikwikhompawundi ekhuselekileyo enendawo enkulu yangaphandle eqhelekileyo. ICompound likhaya lika-c.a. I-5000 yeeflethi kwaye ibamba enye yezona ndawo zinkulu zamazwe ngamazwe e-Istanbul. Amanyathelo kude ungafika kwindawo yentengiso. Kukho iivenkile ezingama-40 apho. Unokufumana iiSupermarket ezi-3 eziphambili, ivenkile yokubhaka entsha, iikhemesti ezi-2, iinwele zamadoda kunye nabasetyhini, iivenkile zokutya kunye nekofu, ivenkile yamantongomane, ivenkile ye-telecom, iiarhente ezininzi zezindlu, isicoci esomileyo, ii-ATM, ibhula kunye nezinye iivenkile ezikhethekileyo.
Igumbi lokulala elikhulu linebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elakhiweyo. Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezi-2 zomntu omnye. Ikhitshi livuliwe kodwa lixhotyiselwe ngokupheleleyo ukupheka nasiphi na isidlo, iipleyiti, iiglasi kunye nezinto zesilivere. I-intanethi ye-Vodafone fiber iyafumaneka. Imboniselo ijonge kwindawo enkulu eqhelekileyo ephakathi kwikhompawundi.
Le ndawo ngokubanzi kunye nale khompani ingakumbi ibamba uninzi lwamazwe ngamazwe e-Istanbul. Unokufumana abantu abavela kumazwe amaninzi abahlala apha. Abantu abaninzi kule khompawundi ziintsapho ezinabantwana. Masigcine intlonipho yethu kubomi boluntu ngelixa sisebenzisa iflethi. Ukuba unomntwana kulula kakhulu ukuseka ubuhlobo kumabala emidlalo okanye kwiindawo zebhola ekhatywayo kwiindawo eziqhelekileyo.
Nceda uzive ukhululekile ukuba undithumelele umyalezo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiza kuphendula nayiphi na imibuzo nokuba inganxulumananga neflethi. Ukuba unengxaki kwaye awuzazi ezona ndlela zingcono zokuyilungisa ngelixa use-Istanbul, ndingakuvuyela ukukunceda nokuba kunjalo.
Nceda uzive ukhululekile ukuba undithumelele umyalezo ngaphambi okanye ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiza kuphendula nayiphi na imibuzo nokuba inganxulumananga neflethi. Ukuba unengx…